Marketers na Machine Mmụta: Ọsọ ọsọ, Amamihe, More dị irè | Martech Zone
Kemgbe ọtụtụ iri afọ, ndị ahịa ejirila A / B nwalee iji chọpụta ịdị irè nke onyinye na ị nweta ọnụọgụ nzaghachi. Ndị ahịa na-eweta nsụgharị abụọ (A na B), tụọ ọnụego nzaghachi, chọpụta onye mmeri, wee nyefee onye ọ bụla onyinye ahụ.
Ma, ka anyị chee ya ihu. Approachzọ a dị nwayọ nwayọ, na-agwụ ike, na enweghị ezighi ezi - ọkachasị mgbe ị tinyere ya na ekwentị. Ihe onye ahia ahia choro n'ezie bu uzo ichota onyinye di nma diri onye ahia obula.
Ndị debanyere aha na Mobile na-eweta ihe ịma aka pụrụ iche mgbe a bịara n’ịchọpụta ụzọ kachasị mma iji tinye ha na draịva. Ọnọdụ ndị na-eji ekwentị agagharị agagharị na-agbanwe agbanwe oge niile, na-eme ka o sie ike ịchọpụta mgbe, ebe, na otu esi eso ha. Iji mee ka ihe ịma aka dịkwuo elu, ndị na-eji ekwentị mkpanaaka na-atụ anya ka ha mee onwe ha ihe dị elu mgbe a bịara n'ihe ha na-eme site na ngwaọrụ nke aka ha. Yabụ usoro A / B nke ọdịnala - ebe onye ọ bụla na-anata onye mmeri - dara na ndị ahịa na ndị ahịa.
Iji merie nsogbu ndị a - ma chọpụta ikike nke ndị na - ere ahịa na - atụgharị na teknụzụ data buru ibu nwere ike ịmalite nyocha omume na mkpebi akpaaka iji chọpụta ozi ziri ezi na ọnọdụ ziri ezi maka ndị ahịa ọ bụla.
Iji mee nke a n'ọtụtụ, ha na-enye nkwado ngwa igwe. Igwe ihe omuma nwere ikike imeghari na data ohuru - na-emeghi ya nke oma maka ya - n'uzo ndi mmadu na-apughi. Yiri nke ntinye data, ihe omumu igwe na-achota otutu data na acho ihe omuma. Agbanyeghị, kama iwepụta nghọta maka omume mmadụ, mmụta igwe na-eji data ahụ iji melite nghọta nke usoro ihe omume ma mezie omume na akpaghị aka. Ọ bụ ihu ọma A / B ule na njikwa ọsọ ọsọ.
Ihe kpatara na ọ bụ onye na-agbanwe egwuregwu maka ndị na-ere ahịa mkpanaka taa bụ n'ihi na mmụta igwe na-akpaghị aka nnwale nke ọnụọgụ ozi na-enweghị ngwụcha, onyinye na ọnọdụ, wee chọpụta ihe kacha arụ ọrụ maka onye, ​​mgbe, na ebe. Chee echiche na-enye A na B, kamakwa E, G, H, M na P tinyere ọnụọgụ ọnụọgụ ọ bụla.
Site n'ikike mmuta ihe banyere igwe, ana edeputa ihe edere na mbufe ozi (dika mgbe ezigara ha, onye ha na ihe onyinye ha dg.) Ma a nabatara onyinye ma ọ bụ na anabataghị, a na-ejide azịza ya dị ka nzaghachi nke na-eme ka ụdị ụdị akpaaka akpaaka dị iche iche maka njikarịcha. A na-eji akuko nzaghachi a iji dozie ngwa ndị na-esote nke otu onyinye ahụ maka ndị ahịa ndị ọzọ na onyinye ndị ọzọ na ndị ahịa ahụ ka onyinye ọdịnihu nwere ike ịdị na-aga nke ọma.
Site na iwepu echiche a, ndị ahịa nwere ike iwepụtakwu oge na-eche echiche banyere ihe na-abara ndị ahịa uru karịa otu esi ewepụta ya na mgbe ọ ga-eweta ya.
Ike ndị a pụrụ iche, enyere site na ọganihu na nnukwu nhazi data, nchekwa, nyocha, na mmụta igwe na-eduga na ụlọ ọrụ mkpanaka taa. Ndị na-ahụ maka ekwentị na-ebute ụzọ iji ha emepụta echiche omume na-atọ ụtọ yana nka na-etinye mkpọsa ahịa nke na-emesịa metụta omume ndị ahịa iji melite iguzosi ike n'ihe, belata iwelata, ma bulie ego n'ụzọ dị egwu.
Tags: ule ulebidoro dataNjikọ ụwangwa igwetesting
Ọ bụ ihe na-atọ ụtọ ịgụ banyere nsogbu ndị ekwentị na-eweta yana otu ndị ahịa si nwee ike iji ike kọmpụta iji gosipụta ọ bụghị naanị otu nhọrọ abụọ, kama ọ bụ otu n'ime ọtụtụ nhọrọ. Inweta ozi ziri ezi nye ndị ahịa ziri ezi. Dị echiche dị otu a ma jiri nkà na ụzụ arụ ọrụ.
Site na usoro ohuru ohuru na teknụzụ ọ dị mma ka emelitere ya na ihe na - eme ma nwekwaa ihe gbasara ahịa ngwaahịa gị. Ozi buru ibu, hụrụ ederede gị n'anya!